IZotope ibhiyozela iAkhademi yoBugcisa beMifanekiso yoBugcisa neNzululwazi ngeBhaso lezeNzululwazi nobuNjineli ngokusetyenziswa komatshini wokufunda + i-AI kwifilimu / studio sokurekhoda | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » IZotope ibhiyozela iAkhademi yoBugcisa beMifanekiso yoBugcisa kunye neNzululwazi ngeBhaso lezeNzululwazi nobuNjineli ngokusetyenziswa komatshini wokufunda + i-AI kwifilimu / studio sokurekhoda
iZotope, inkokeli kushishino kubuchwephesha beteknoloji enengqondo, yamkelwa yi I-Academy yeMotion Picture Arts kunye neSayensi nge Ibhaso lezeNzululwazi nezeNjineli. Iimpawu eziphambili zikhokelela umphandi UAlexey LukinUmsebenzi kwiZotope's Inkqubo yokulungisa iaudiyo yeRX ecaleni kweqela leemathematika ezingaphezu kwe-70, iinjineli zesoftware, abaqulunqi bezandi, iingcali zemveliso kunye nabanye.
Ukunikezelwa kwimpumelelo evelisa ifuthe eliqinisekileyo kwinkqubela phambili yemveliso yemifanekiso eshukumayo, iwonga leNzululwazi kunye nezoBunjineli libeka imeko ye-RX njengesixhobo somgangatho oshishino wokulungiswa komsindo kunye nokuphuculwa kwemveliso yeefilimu zangoku. Sebenzisa inkqubela phambili yetekhnoloji ekusetyenzisweni kwemiqondiso yedijithali kunye nokufunda ngomatshini, i-RX incede iifilimu ezingenakubalwa kunye nemidlalo yeTV ukubuyisa isandi esonakeleyo, esinengxolo kwimeko efanelekileyo. Izixhobo ezikrelekrele, ezixhaswe kukufunda komatshini, zidityaniswe nomboniso obonakalayo ovumela abasebenzisi ukuba bahlele isandi ngokungathi bahlela umfanekiso. Ukuqala ukwaziswa ngo-2007, iZotope RX iguqukele kwiinguqulelo ezisixhenxe ezilandelayo ukuba ibe sesona sicwangciso silungileyo sokulungiswa kwesandi kunye nezixhobo zokuphucula ezikhoyo.
I-RX inegalelo kuluhlu olubanzi lwe Award Academy AwardIifilimu ze-® zokuphumelela kuHlelo lweSandi kunye nokuDibanisa iZandi kubandakanya Whiplash, Mad Ubuninzi: Ukuphuphuma Road, yaye ibohemian rhapsody, kunye noMninimzi oPhambili woMfanekiso Birdman kunye noluhlu olude lweefilimu eziphezulu ezibandakanya Black Panther kwaye Abadlali: Ixesha lokugqibela. Amandla e-RX okonga iaudiyo eyonakalisiweyo yenza ukuba kukhutshwe ifilimu yokugqibela ka-Orson Welles Elinye icala lomoya Ngelixa kusonjululwa iingxaki zomsindo wemihla ngemihla kwiimveliso eziphambili zangoku ezibandakanya "Umdlalo weZihlalo zobukhosi" kunye "nabaFileyo abahambahambayo." Ihlala ihlonitshwa yimibutho yoshishino enje ngeCinema Audio Society (i-5-time winner for Achievement Achievement), i-RX iguqule ubugcisa kunye nesayensi yesandi sefilimu.
“Kulilungelo elikhulu kuAlexey kunye neqela elikwiZotope ukufumana eli wonga,” utshilo UMark Ethier, Umseki kunye neCEO yeZotope. “Njengenkampani ukugxila kwethu kukuxhasa umsebenzi wokuyila we ifilimu ngokususa izithintelo zobuchwephesha kwimveliso yeaudio, kwaye siyayixabisa le nto yokwamkelwa kwezinto ezintsha kule ndlela. Sikwabulela kakhulu kuluntu lweengcali zomsindo eziye zasixhasa kule minyaka idlulileyo. Kukulandela kwabo eyona migangatho iphezulu kumabali ayilayo okuqhubele umsebenzi wethu. ”
“Kwakuyiminyaka eli-18 eyadlulayo apho ndaqala khona ukuphuhlisa iimbono ezimbalwa zobuchwephesha ezaziza kuthi kamva zibe yiZotope RX,” wongeza uAlexey Lukin, Injineli yeNqununu ye-DSP eZotope. "Olu tshintsho lwekhulu lemigca yekhowudi ye-C ++ kwi-suite esemgangathweni yezixhobo ezikhoyo namhlanje ngekhe zenzeke ngaphandle kobudlelwane bethu obumangalisayo kunye neengcali zeposi eziviwayo. Ukuva ngokuthe ngqo kubo malunga neemfuno zabo zoyilo kusixhobisile kwaye kwasikhuthaza ukuba senze iindlela ezingenakwenzeka zokuhlela iaudiyo ziyinyani.
IZotope iphumelele udumo olukhulu kwisoftware yokuvelisa umculo, kubandakanya Ozone ukulawula kakuhle, Neutron yokuxuba, kunye Spire ikhosistim yokurekhoda, ukuvelisa kunye nezixhobo zentsebenziswano. Phakathi kwabalandeli bakaSpire abazimiseleyo nguPete Townshend, uTrey Anastasio, uPebeebe Bridgers, uHaramley kaParamore uHayley Williams nabanye abaninzi, ngelixa isoftware yeZotope incedise ekubumbeni iirekhodi zikaBeyonce, uSia, uDoja Cat, uShawn Mendes, uKendrick Lamar nabanye.
KwiZotope, sithanda kakhulu isandi esikhulu. Itekhnoloji yethu yeaudio ekrelekrele inceda iimvumi, abavelisi bomculo, kunye neenjineli zeposti yeaudiyo kugxila kubugcisa babo endaweni yobuchwephesha obungemva kwayo. Siyila isoftware ephumelele amabhaso, ii-plug-ins, izixhobo zekhompyutha kunye neeapps ezixhaswayo ngowona mgangatho uphezulu wokulungiswa kwesandi, ukufunda ngomatshini kunye nokuhlangana okumangalisayo ngendlela enomdla.
Previous: ULynette Duensing Ebizwa njengoMbutho woMbala weLizwe
next: I-cinematographer uMark Patten BSC udibanisa kunye neelensi zokupheka ezivela kwii-eras ezahlukeneyo kwi-Marksman